सञ्जीवको ब्लग: विकास रोज्ने कि लोकतन्त्र ?!
टिप्पणीहरूमा जानुअघि एउटा कुरा प्रस्ट पारिहालौँ -यो लेखमा मेरो उद्देश्य अर्थशास्त्री पौडेलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने अवश्य पनि होइन । यद्यपि, लोकतन्त्र र विकासबिच उहाँले देखाउनुभएको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या छन् । यो लेख ति समस्याहरूलाई खोतल्ने प्रयास हो ।
पहिलो -उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लोकतन्त्र विलासिता हो’ भन्ने टिप्पणीको चर्चा गर्न लोकतन्त्रको अर्थ, स्रोत र राज्यसँग यसको सम्बन्धलाई हेरौँ ।
सामान्य छलफलहरूमा लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा हामी संस्था (Institutions)हरूका बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ । पार्टी, निर्वाचन, संसद्, सरकार, सञ्चारमाध्यम जस्ता संस्थाहरू लोकतन्त्रका ठोस तस्वीर हुन् । सम्भवतः विश्व पौडेलको ‘लोकतन्त्र विलासिता हो’ भन्ने टिप्पणी यही अर्थसँग सम्बन्धित छ । यद्यपि, विकास वा राज्यको चरित्रको विश्लेषणका लागि लोकतन्त्रको अर्थलाई संस्थाको अर्थमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रका आधा अर्थहरू हुन् । यसको अर्को आधा अर्थ स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । कुनै व्यवधानबिना हिँडडुल गर्न पाउने, भेला हुने, छलफल गर्ने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने, आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने, आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न पाउने, आफ्ना रुचि र प्राथमिकता पछ्याउन पाउने -यावत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको केन्द्रीय पक्ष हो । राजनीतिक दल, सरकार, संविधान, नियमकानुन यसको रक्षाका लागि बनाइएका संस्था र पद्दतिमात्र हुन् ।
त्यसैले, लोकतन्त्रलाई ‘बिलासिता’ भनेर परिभाषित गर्नु भनेको मानिस भएका नाताले मानिसले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारहरूको अवमूल्यन गर्नु हो ।
लोकतन्त्रबारेको बुझाइमा रहेको यस समस्यालाई यसको स्रोतका आधारमा हेरौँ । धेरै मानिसहरूमा लोकतन्त्रको स्रोत संविधान, सरकार, राजनीतिक पार्टी हुन् भन्ने बुझाइ छ । वास्तवमा तिनीहरूको दायित्व लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र यसलाई व्यवस्थित बनाउने हो । लोकतन्त्रको स्रोत राज्य होइन । राज्यले मानिसलाई लोकतन्त्र दिने होइन । स्वतन्त्रता राज्यको स्थापनाबाट शुरु भएको होइन । राज्यको स्थापना र विकास हुनुभन्दा अघि पनि मानिस स्वतन्त्र थिए । त्यसैले, स्वतन्त्रता मानिसको प्राकृतिक अधिकार हो -स्वतन्त्र हुने कि नहुने भन्ने ‘चोइस’को कुरा हुनै सक्दैन ।
लोकतन्त्र महँगो हुन्छ कि सस्तो हुन्छ ? वा, लोकतन्त्र आवश्यकता कि बिलासिता ? भन्ने खालका प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई राज्यले जनतालाई निगाह ('डिस्क्रेशन')स्वरूप दिएको उपहारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् ।
राज्य लोकतन्त्रको स्रोत होइन, तर राज्य र लोकतन्त्रबिचको सम्बन्ध जटिल र समस्याग्रस्त छ । यसो हुनुको कारण के भने मानिसका लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा आज राज्यबाटै छ । राज्य (वा राजनीतिक दल, सरकार, आदि) विभिन्न बहानामा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने वा हरण गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् । कहिले ‘विकास’ गर्न पाइएन भनेर त कहिले सुरक्षामा खतरा भयो भनेर । केहीले राजनीतिक सिद्धान्तको आडमा र केहीले धर्मको रक्षा गर्ने बहानामा पनि यसो गर्छन् । त्यसैले, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न मानिसहरू राज्यसँग अनवरत लडिरहनु परेको छ । यस्तो लडाईंको अनुभव नेपालसँगै छ र संसारका विभिन्न ‘अलोकतान्त्रिक’ देशमा यो लडाईं चलि नै रहेको छ ।
अब विकासको कुरा गरौँ ।
धेरै अर्थशास्त्रीको समस्या के हो भने उनीहरू अर्थतन्त्रलाई इतिहास र राजनीतिसँग जोडेर व्याख्या गर्न रुचाउँदैनन् । उत्पादन र वितरणका शास्त्रीय मान्यताबाट अर्थतन्त्र र यसमा आउने परिवर्तनबारे मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अर्थशास्त्रको केन्द्रमा छ । त्यसैले, अधिकांश अर्थशास्त्रीको विकासबारेको बुझाइ सतही र अनुपयोगी छ ।
सामान्य कुराकानीमा विकासलाई सकारात्मक परिवर्तनको पर्यायवाची मान्ने चलन छ । तर, विकासको विशिष्ट अर्थ छ । अर्थशास्त्री पौडेललाई अवश्य पनि थाहा छ -आज हामी जे कुरालाई विकास वा अङ्ग्रेजीमा ‘डिभेलपमन्ट’ भन्छौँ त्यो इतिहासको निश्चित कालखण्डमा निर्माण भएको ‘कन्स्ट्रक्ट’ हो जसले अर्थतन्त्रका निश्चित मानकहरूका आधारमा एउटा समाज र राष्ट्रको मूल्यांकन गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तपछि शुरु भएको यस अवधारणाका आधारमा आज पनि हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, अर्थतन्त्रको आकार, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, स्वामित्व र उपभोगमा आएका निश्चित खालका परिवर्तन आदिलाई विकासका मापक मानिरहेका छौँ ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि विकास भनेको सबै प्रकारको सकारात्मक परिवर्तन होइन । यो एउटा विशिष्ट प्रकारको परिवर्तन हो जसको चरित्र र जिम्मेवारीको संरचना निश्चित प्रकारको छ । अर्थशास्त्रीहरूलाई विकासको यो निश्चित र सीमित परिभाषाको अर्थराजनीतिमा चासो छैन । उनीहरू विकासलाई निरपेक्ष र सर्वस्वीकार्य अवधारणाका रूपमा बुझ्न चाहन्छन् । अर्थशास्त्री पौडेलले अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गरेको विकासको व्याख्या पनि यही समस्याबाट ग्रसित छ ।
विकासको यो अवधारणामा दुई समस्या छन् ।
आज हामीले सहज रूपमा प्रयोग गर्ने विकास शब्दको अर्थमा निहित जटिलता के छ भने यस अवधारणालाई प्रश्नहरूभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति छ । विकासको आवश्यकतामाथि शंका गर्न पाइँदैन । विकासलाई अपरिहार्य मानिएको छ । यो साधन र साध्य दुबै हो भन्ने विश्वास छ । यसलाई संसारका सबै 'अविकसित' देशहरूको साझा लक्ष बनाइएको छ । हामी जस्तो परिवर्तनलाई विकास भनिरहेका छौँ र त्यसलाई हासिल गर्न लागि परेका छौँ -के त्यो साँच्चिकै सम्भव छ ? त्यसैगरी, के माथिको परिभाषामा भनिएको जस्तो विकास हाम्रा लागि लाभदायक नै छ ? अर्थात्, के त्यस्तो विकासले हामीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ला ? विविध आवश्यकता र अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्नसक्ला ?
विकासको शक्तिशाली अवधारणाभित्र यी प्रश्नहरूलाई कुनै स्थान छैन ।
गरीब भनिएका प्रशस्त देशले विकसित हुन गरेका प्रयत्न, ति प्रयत्नहरूको असफलता र त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ -अर्थशास्त्रीहरूले मन पराउने गरेका विशिष्ट मानकहरूबाट परिभाषित विकास नेपालजस्तो देशका लागि सम्भव र लाभदायक नहुन सक्छ । त्यसैले, विकासको स्वतः असल र सर्वस्वीकार्य हो भन्ने अवधारणालाई पुनर्विचार आवश्यक छ ।
अब लागौँ विकासको अवधारणासँग सम्बन्धित दोस्रो समस्या समस्यातर्फ जुन विकास गरिदिने र विकास लिनेबिचको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ ।
विकास (वा भनौँ कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन)को स्रोत वा माध्यम के हो ? विद, विज्ञ, राजनीतिज्ञ, सम्भ्रान्तहरूमात्र होइन सर्वसाधारणको पनि बुझाइ के हो भने विकास जान्नेबुझ्नेले नबुझ्नेहरूका लागि सम्भव गराइदिने परिवर्तन हो । विकासको एउटा कुनामा जान्नेसुन्ने मानिसहरू हुन्छन् जसले अरूलाई के चाहिएको छ, के लाभदायक छ आदि निर्क्यौल गर्छन् -अर्को कुनामा अबुझहरू हुन्छन् जसले जान्नेबुझ्नेले दिएको विकास उपभोग गर्छन् । विकास सम्भव गराइदिने जान्नेबुझ्ने विज्ञहरूले बिना अवरोध काम गर्न पाउनुपर्छ, प्राप्त गर्ने अबुझहरूले हातमा परेको विकास कुनै प्रश्न नगरी उपभोग गर्नुपर्छ ।
यस्तो विकासका लागि राजनीति चाहिँदैन, लोकतन्त्र चाहिँदैन, जनता चाहिँदैन, प्रकृति चाहिँदैन, भविष्य चाहिँदैन । मलाई डर केमा छ भने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले संकेत गर्नुभएको विकास यस्तै विकास हो । यस्तो विकास चीनमा छ, कोरियामा छ, साउदी अरबमा छ र लोकतन्त्रको ‘बिलासिता’लाई त्याग्ने हो भने नेपालमा पनि सम्भव हुनसक्छ । तर, के जनताको भूमिका र स्थान नरहने यो विकास नेपालको लक्ष हुनसक्छ ?
लोकतन्त्रलाई बिसाएर विकास गरौँ भन्ने धारणा नेपालमा मात्र होइन प्राय सबै गरीब देशमा प्रशस्त चलनचल्तीमा रहेको धारणा हो । सत्ता र शक्तिमा अकन्टक बर्चस्व जारी राख्न चाहने शासक वर्गले लोकतन्त्रलाई विकासको अवरोध ठान्छन् । 'लोकतन्त्र भएर विकास गर्न पाइएन' भनेर गुनासो गर्छन् । अर्थशास्त्री पौडेलले भन्नुभएझैं -'डेलिभरी'का लागि लोकतन्त्रलाई अवरोध ठानिन्छ ।
तर सहजै बिर्सन नहुने के भने लोकतन्त्र ‘नेगोशिएब्ल’ कुरा होइन । तानाशाही व्यवस्था शासकको महत्त्वाकाङ्क्षाको उपज हो -देशको आवश्यकताको उपज होइन । आज आर्थिक रूपमा सबल र भौतिक पूर्वाधारबाट सम्पन्न चीनजस्ता अलोकतान्त्रिक देशका जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासँग ति कुरा साटेका होइनन् । यस्तो ‘चोइस’ ति देशका जनतालाई दिइएको थिएन । संसारमा कहीं पनि तानाशाहीको स्थापना यसरी भएको होइन ।
संसारका विभिन्न ठाउँका अनुभवले के देखाएका छन् भने अविकास एउटा त्यस्तो कन्स्ट्रक्ट हो जसलाई अर्थशास्त्री र विज्ञहरूले परिभाषित गरिदिएका छन् र तानाशाहहरूले उपयोग गरेका छन् । तर, यथार्थमा लोकतन्त्र न त 'विकास'को बाधक हो न तानाशाही अविकासको समाधान ।
जुन देशमा मानिसहरूले आफ्ना नैसर्गिक अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् त्यस देशका जनता राज्यका दासका रूपमा बाँचिरहेका हुन् । यसको पिडा भोग्नेलाई थाहा होला । चीन वा साउदी अरबजस्ता देशमा अत्यन्त आधारभूत अधिकारका लागि मानिसहरूले गर्नुपरेको सङ्घर्ष संसारसामु प्रस्ट छ । त्यहाँका चौडा बाटा, बुलेट रेल, फ्लाइओभरबाट मानिसहरू सन्तुष्ट छन् र उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको चाहना छैन भन्ने कोरा अनुमान मात्र हो ।
विकास (वा सकारात्मक परिवर्तन) शासकले जनताका लागि सम्भव बनाइदिने प्रक्रिया होइन । आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण -जसलाई गलत ढङ्गले विकास भनेर परिभाषित गर्ने गरिन्छ -जनता स्वयंले आफ्ना लागि सम्पन्न गर्ने र गर्नपर्ने प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँलाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने निर्क्यौल बन्द कोठामा बसेर कुनै विद, विज्ञ, विद्वान वा अर्थशास्त्रीले गर्ने होइन -काठमाडौँका जनताले नै गर्ने हो । यसका लागि उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि रोज्छन्, छलफल गर्छन्, विरोध-प्रदर्शन गर्छन्, सभा-सम्मेलन गर्छन्, योजना बनाउँछन्, लागु गर्छन् । यस्तो गतिशीलता नभएको परिवर्तन मुर्दाहरूका लागि लक्षित परिवर्तन हो जसको सम्बन्ध मानिसको जीवनसँग हुँदैन ।
त्यसैले, लोकतन्त्र रूपान्तरणको बाधक होइन, माध्यम हो । लोकतन्त्रले मानिसको जीवनसँग जोडिने रूपान्तरणलाई सम्भव बनाउँछ । राजनीतिक अधिकारको उपभोगमार्फत आम मानिस शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा सार्थक रूपमा सहभागि हुने वातावरण दिगो रूपान्तरणको आधार हो ।
अर्थशास्त्री पौडेलले अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गर्नुभएको टिप्पणीमा ००७ सालको परिवर्तन, पञ्चायकालदेखि अहिलेसम्म विकास किन भएन भन्ने व्याख्या छ, तर त्यो व्याख्या त्यसबेलाका शासकहरूको चाहना र क्षमताको चर्चामा सीमित छ । मूल कुरा त के हो भने पञ्चायत र त्यसपछि पनि नीतिनिर्माण र शासन व्यवस्थामा आम मानिसको सार्थक सहभागिता हुन पाएन । भूमिसुधार, गरिबी निवारण, आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्ती, एशियाली मापदण्ड आदि जार्गनहरूमार्फत् शासकले जनताको समर्थन बटुल्ने प्रयास गरे । तर, शासकको चाहनाले मात्र ति उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव थिएन । शासन प्रक्रियामा आम मानिसका चाहना मुखरित हुने वातावरण विगतमा थिएन, न त अहिले नै पर्याप्त छ ।
हरेक देश वा समाजका आ-आफ्ना विशिष्टता हुन्छन् । ति विशिष्टता इतिहास, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यमान्यता आदिबाट निर्माण भएका हुन्छन् । त्यसैले, परिवर्तनको स्वरूप र लक्ष सबै ठाउँमा समान हुँदैन । काठमाडौँका लागि जुन कुरा विकास हो, कैलालीका लागि त्यही कुरा प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । नेपाल विशिष्ट यस अर्थमा छ कि यसमा प्रशस्त विविधता छ । यो विविधताको ठूलो महत्त्व छ । परिवर्तनको ढाँचा र प्रक्रिया यही विविधतालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिनुको विकल्प छैन । यस्तो ढाँचा र प्रक्रियाको निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अग्रस्थानमा आम नागरिक हुनुपर्छ । यो कुरा लोकतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ ।
अन्तमा, अर्थशास्त्री पौडेलको अन्तर्वार्तामा उठेको एउटा प्रसङ्गलाई गहिराइमा हेर्न आवश्यक छ । यसको विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव नभए तापनि विषय उठानसम्म गरौँ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास र गरीबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धिलाई अहिले ‘विकासको वैकल्पिक मोडेल’का रूपमा संसारभर जोडतोडले प्रचार गरिँदैछ । एसिया, अफ्रिका र केही दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा चीनको प्रगतिलाई उदाहरणीय मान्ने र त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्माण गर्ने लहर चलेको छ । यो लहरमा चीन स्वतन्त्र पर्यवेक्षकमात्र छैन, यसलाई संसारभर 'बेच्न' र यसमार्फत् संसारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय पनि छ ।
विकासको यो चीनीया मोडल भनेको "भौतिक पूर्वाधार र उपभोग नै सबै कुरा हो, नागरिक स्वतन्त्रता नभए केही फरक पर्दैन" भन्ने मान्यतामा आधारित मोडेल हो । यो मोडेल शाासकले जनताका लागि गरिदिने विकासको मोडेल हो । के यस्तो मोडेल विविध ऐतिहासिकता, सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषता, चाहना र अपेक्षा भएका नेपाल वा नेपालजस्ता अन्य देशका लागि स्वीकार्य र उपयोगी होला ? यो प्रश्न गम्भीर छ । अहिलेसम्मको अनुभवचाहिँ के भने चीनीया मोडेलको सपनामा लागेर धेरै गरीब देशहरूले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलन गुमाइरहेका छन् । यसबाट चीनले प्रशस्त लाभ लिइरहेको छ ।
अर्थशास्त्री पौडेल चीनको जस्तो लोकतन्त्र मासेर विकास पछयाउने पक्षमा हुनुहुन्न । तर, चीन र अन्य केही अलोकतान्त्रिक मुलुकका विकासलाई उहाँले जसरी सकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसमा प्रशस्त समस्या छ । यो समस्याको चुरो के भने यसले लोकतन्त्रसँग जोडिएका मानिसका नैसर्गिक अधिकारको अवमूल्यन गर्छ र परिवर्तनलाई भौतिक पूर्वाधार र उपभोगमा सीमित राख्छ ।
मेरो बुझाइमा अर्थशास्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विकास र लोकन्त्रबारेका टिप्पणीको मूल समस्या पनि यही हो ।
नोटः कृपया यस ब्लगलाई अन्यत्र प्रकाशित नगरिदिनुहोला ।
Posted by Sanjeev at 3:38 PM